သင် LEGO ကိုဝယ်သင့်ပါတယ် Creator Expert 10295 Porsche 911?
23 / 03 / 2021 31 / 03 / 2021 Dimitri 294 Views စာ0မှတ်ချက် 10262 ဂျိမ်းစ်ဘွန်း Aston M ကartDB5 ၌တည်၏, 10295 Porsche 911, 10295 Porsche 911 Turbo နှင့် 911 Targa, 18 +, Creator Expert, Lego, lego ပြန်လည်သုံးသပ်, သူ Mike Psiaki, Porsche 911, reviews
ဒီနှစ်မှာလိမ့်မယ် Creator Expert မော်တော်ယာဉ်လွှတ်ပေးရေး, 10295 Porsche 911, ကမ္ဘာ့အထင်ရှားဆုံးနှင့်အသိအမှတ်ပြုအားကစားကားများထဲမှတစ် ဦး သစ္စာနှင့်ထိုက်တန်သောအပန်းဖြေဖြစ်လိမ့်မည်နည်း
Lego ပရိသတ်များသည်နှစ်စဉ်ရိုးရာအစဉ်အလာအချို့နှင့်ဆက်ဆံခံရပြီးအထင်ကရ၊ ချောမွတ်သော၊ Creator Expert (ယခု 18+) မော်တော်ယာဉ်ဟာပျေါလှငျအကြားသည်။ နှစ်စဉ်ကုန်သွားသည်နှင့်အမျှဘားသည်အဆက်မပြတ်မြင့်တက်လာသည်။ တည်ဆောက်မှုအတွင်းသရုပ်ပြဖန်တီးမှုအဆင့်နှင့်နောက်ဆုံးမော်ဒယ်၏တိကျမှုစသည်တို့မှဖြစ်သည်။
10295 Porsche 911 sm ကိုပြသသည့်မော်ဒယ်တစ်မျိုးတည်းသာမဟုတ်ဘဲပရိသတ်များကိုဆက်လက်တင်ပြနေခြင်းဖြစ်သည်art ဒီဇိုင်း, လိမ္မာပါးနပ် partအသုံးပြုမှုနှင့်ထူးခြားသောဆောက်လုပ်ရေးနည်းစနစ်များသာမကတစ်ခုထက်မကတည်ဆောက်ရန်အခွင့်အလမ်းကိုလည်းပေးခဲ့သည် classic Porsche 911: အဆင်ပြေနေသော Turbo သို့မဟုတ်ချောမွတ်သောအပေါ်ဘက်အောက်ဘက်ရှိ Targa ။
လက်စွဲစာအုပ်၏ပထမစာမျက်နှာအနည်းငယ်မှဒီဇိုင်နာ၏တွေ့ဆုံမေးမြန်းခန်းမှဤပုံစံသည်စိတ်အားထက်သန်သောပရောဂျက်တစ်ခုဖြစ်ကြောင်းပြသခဲ့သည်မှာ ၉၁၁ ၏ရှေ့တန်းဘမ်ပါ၊ ရှေ့မီးနှင့်ကွေးနေသောကိုယ်ထည်၏ထူးခြားထင်ရှားသောပုံသဏ္andာန်နှင့်လှပသောလိုင်းများကိုမည်သို့ပြန်လည်ဖန်တီးမည်ဆိုသည်မှာရှင်းနေပါသည်။ ဒီဇိုင်နာတွေရဲ့ ဦး နှောက်သုံးခုကိုစမ်းသပ်ပြီးနောက်ပုံစံငါးမျိုးနဲ့နောက်ဆုံးမှာတော့ဒီနောက်ဆုံးဒီဇိုင်းကိုနှစ်သက်လာကြပါတယ်။ အဆုံးစွန်သောမေးခွန်းမှာသူတို့မှန်ကန်စွာရခဲ့သလား။
theme: Creator Expert အမည်သတ်မှတ်မည် - 10295 Porsche 911 ဖြန့်ချိ: မတ်လ 1, 2021
စျေးနှုန်း: £ 119.99 / € 149.99 / $ 149.99 အပိုင်းပိုင်း: 1458 အသေးစားပုံများ: 0
ကြီးမားကျယ်ပြန့်သောညွှန်ကြားချက်စာအုပ်ငယ်၏စာမျက်နှာအနည်းငယ်တွင်ကမ္ဘာကျော်မော်တော်ကားဒဏ္legာရီပုံပြင်များပါရှိသည်။ လှပသောပုံရိပ်များနှင့်ရင်သပ်ရှုမောဖွယ်ကောင်းသောကိုးကားချက်များဖြင့် တွဲ၍ ၎င်းသည်အဘယ်ကြောင့် Porsche 911 သည်အစဉ်အဆက်ဖန်တီးခဲ့သည့်အရေးကြီးဆုံးမော်တော်ကားများထဲမှတစ်ခုဖြစ်ပြီးလာမည့်တည်ဆောက်မှုအတွက်စိတ်လှုပ်ရှားမှုကိုဖြစ်ပေါ်စေကြောင်းအတိအကျဖော်ပြသည်။ Porsche ၏မူလဇာစ်မြစ်အဖြစ်ညွန်ကြားချက်အရလက်စွဲစာအုပ်သည်အင်္ဂလိပ်နှင့်ဂျာမန်နှစ်ဘာသာစလုံးဖြစ်သည်။
အခြားမတူဘဲ Creator Expert အစုံ, 10295 Porsche 911 နှစ်ခုအတွက်တည်ဆောက်ပေးထားပါတယ်။ ဟုတ်ပါတယ်, နှစ်ခုလုံးကိုတစ်ချိန်တည်းမှာတည်ဆောက်လို့မရပါဘူး။ ဒါပေမယ့်အခြေခံမော်ဒယ်ကိုအနည်းငယ်ပြုပြင်ခြင်းဖြင့်သင့်တွင်စွမ်းအားကောင်းသော Turbo 911 ရှိနိုင်သည်။ နောက်ကျော spoiler နှင့် chunky နောက်ဘီးမုတ်များသို့မဟုတ် open-top ရှုပ်ထွေးသော Targa ရှိနိုင်သည် ။ ပထမအိတ်ခုနစ်လုံးတွင်အခြေခံပုံစံအတွက်လိုအပ်သောအပိုင်းအစများရှိသည်။ အိတ်ရှစ်နှင့်ကိုးအိတ်တွင် Turbo နှင့် p စရန်လိုအပ်သည့်အရာများပါ ၀ င်သည်artအိတ် ၁၀ ခုထဲ၌ s သည် Targa ကိုဖန်တီးလိမ့်မည်။ ၎င်းသည်ခိုင်မာသည့်အခင်းအကျင်းအတွက်အသစ်သောလှည့်ကွက်တစ်ခုဖြစ်ပြီးအခြားအရာများထက်အသက်ရှည်ခြင်းကိုပိုပေးသည်။
တိကျသောမော်ဒယ်မည်သို့ပင်ဖြစ်ပါစေ၊ Porsche 911 သည်၎င်း၏ထူးခြားသောမျဉ်းကွေးများနှင့်ထောင့်များကြောင့်ကျော်ကြားသည်။ ရလဒ်အနေဖြင့်ဤအစုံတွင်၎င်းတို့ကိုထိရောက်စွာဖမ်းယူနိုင်ရန်အပိုင်းအစများနှင့်အရောင်ပြောင်းရောင်စုံအသစ်များကိုမိတ်ဆက်ပေးခဲ့သည်။ အဖြူရောင် 10x2x2 ဘယ်ဘက်နှင့်ညာဘက်ကွင်းများနှင့်အဖြူထောင့်5×5အုတ်များသည်အသစ်စက်စက်ဖြစ်သည်arts နှင့်အနက်ရောင်နှင့်အဖြူရောင် 1x1x2 ကွင်းခတ်များ၊ Trans-orange 4x1x2 sloped curves များ၊ အဖြူရောင်ထောင့် ၃ × ၃ ပြားနှင့်အရွယ်အစားကြီးမားသောစုဆောင်းခြင်းများအပါအ ၀ င်ပြန်လည်အရောင်ပြောင်းသောဒြပ်စင်များစွာရှိသည်။ ပုံနှိပ်စာစောင်စartကျန်တဲ့သီးသန့်အပိုင်းအစတွေကိုပါလုပ်ထားတယ်။ ထူးခြားတာကတော့စတစ်ကာစာရွက်မရှိဘူး။
ဒီဇိုင်နာ Mike Psiaki သည်အတော်များများအတွက်တာဝန်ရှိသည် Creator Expert မော်တော်ယာဉ်များနှင့်ရလဒ်အဖြစ်ပရိတ်သတ်များ, ထူးခြားတဲ့ p ၏မြင့်မားသောဖန်တီးမှုအဆင့်ကိုမျှော်လင့်လာကြပြီartအသုံးပြုမှုနှင့် smart မိမိအတည်ဆောက်ထံမှဒီဇိုင်း။ ဒီအစုသည်ကွဲပြားခြားနားသည်၊ ယခင်ကအသုံးချသည့်နည်းစနစ်များကိုပိုမိုတိုးတက်အောင်နှင့်ဆက်လက်တိုးတက်စေရန်အပြင်အရင်ကမတွေ့ခဲ့ဖူးသောထူးခြား။ စိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်ကောင်းသောနည်းလမ်းများကိုမိတ်ဆက်ပေးခဲ့သည်။
၎င်းသည်ဘောင်တည်ဆောက်ခြင်း၏အတော်အတန်ရိုးရှင်းသောအလုပ်အကိုင်အပြီးတွင် bodywork နှင့်အတွင်းပိုင်းအသေးစိတ်အချက်အလက်များအားဖြည်းဖြည်းချင်းတည်ဆောက်ခြင်းသည်အပျော်အပါးတစ်ခုဖြစ်ပြီးအများစုမှာစိတ်ကျေနပ်ဖွယ်ကောင်းသောနည်းလမ်းများနှင့်အတူတကွတွဲဖက်တတ်သောပါးနပ်သောစုရုံးမှုများပါ ၀ င်သည်။2×4ကွေးညွှတ်ထားသောကြွေပြားများကိုလိမ္မာပါးနပ်စွာအသုံးပြုခြင်းသည်မူဘောင်ကိုနောက်ကျောထောင့်အမိုးအပိုင်းနှင့်ဆက်သွယ်နိုင်သည်။ pin ကိုင်သူများနှင့် 1 × 1 ပတ်ပတ်လည်အုပ်ကြွပ်များကိုထိပ်ပိုင်းသို့ချိတ်ဆက်ထားသည် နည်းပညာ အဆောက်အ ဦး ၏ ဦး တည်ချက်ကိုနောက်ပြန်လှည့်ထားသောအုတ်များဖြင့်ထိတွေ့သောလုံးများကိုနောက်ဘီးမုတ်များနှင့်ချိတ်ဆက်ရန်ခွင့်ပြုသည် (Turbo နှင့် Targa တွင်မတူညီသောဘီးမုတ်များရှိသည်၊ ထို့ကြောင့်ဤအပိုင်းကိုအလွယ်တကူလဲလှယ်နိုင်သည်။ )
ထိပ်ထိပ်ရှိ pin အပေါက်ပါသည့် ၁ × ၂ ပြားကိုဘီးမုတ်၏ထိပ်ကိုတည်ဆောက်သောအခါဖန်တီးရန်အသုံးပြုသည်။ သေးငယ်သည့်လက်အောက်ငယ်ခွဲငယ်တစ်ခုသည်၎င်းတို့ကိုနှစ်ခုပြားကိုကြီးမားသောပြားများ၏တစ်ဖက်တစ်ချက်စီတွင်ညှပ်ထားပြီး 1 ×2ပြားများပါရှိသည်။ ၎င်းသည်စုဝေးမှုအတွင်း၌အနည်းငယ်သောလှုပ်ရှားမှုအနည်းငယ်ကိုပြုလုပ်ပေးပြီးအလွန်နည်းသောကျဆင်းခြင်းကိုဖြစ်စေသည်။ ပုံမှန်ဆက်သွယ်မှုနှင့်အတူတူပင်သေးငယ်သည့်ထောင့်သည်မဖြစ်နိုင်သကဲ့သို့၎င်းသည်တီထွင်ဆန်းသစ်မှုရှိသည်။ အဆင့်တိုင်းနီးပါးတွင်ဤအံ့သြဖွယ်ကောင်းသောဒီဇိုင်းစုံလင်သောအိတ်ကပ်လေးများရှိသည်။
ဤသည်အတွင်းပိုင်းကဏ္toများကိုတိုးချဲ့။ ရှေ့ထိုင်ခုံများသည်လှပသောကွေးနေသောပုံစံကိုဖန်တီးရန်3×3ထောင့်ပြားများကိုအသုံးပြုသည်။ ထိုင်ခုံတစ်ခုစီကိုသီးခြားစီဆောက်လုပ်ပြီးပတ္တာဆလင်ဒါတွင်တပ်ဆင်ထားသဖြင့်၎င်းတို့သည်တကယ့်မော်တော်ယာဉ်ကဲ့သို့ပင်ရှေ့သို့လှည့်ရန်ခွင့်ပြုသည်။ ၎င်းသည်မလိုအပ်သောအင်္ဂါရပ်တစ်ခုဖြစ်သော်လည်းအလွန်ကြိုဆိုခြင်း၊ အလွန်ဖန်တီးမှုနှင့်ပျော်စရာကောင်းသောဒီဇိုင်းကိုဖော်ပြခြင်းမပြုပါ။ လက်ကိုင်ဘရိတ်သေးသေးလေးနှင့်အလုပ်လုပ်သောဂီယာချောင်းတစ်ချောင်းသည်ထူးဆန်းပြီးတိကျသောအသေးစိတ်အချက်အလက်များကိုထည့်သွင်းထားသည် - ၎င်းသည်ဂီယာတုတ်၏ဒီဇိုင်းကဲ့သို့သောအရိုးရှင်းဆုံးအရာသည်သင်၏မျက်နှာကိုအကြီးအကျယ်ပြုံးနိုင်သည့်ဤစက်၏တီထွင်ဖန်တီးမှုကိုသက်သေထူသည်။
ဒီဟာမင်းရဲ့ပထမဆုံးမဟုတ်ပါဘူး Creator Expert ကား, သင်မော်ဒယ်၏အစိတ်အပိုင်းများကိုအချို့တည်ဆောက်ပုံ၏အဆုံးစွန်သောအဆင့်တွင်အတူတကွထားကြသည်လမ်းနှင့်အတူကျွမ်းတစ်သဘောမျိုးခံစားရပေမည်, ဒါပေမယ့်ဒါဟာအဘယ်သူမျှမလမ်းအတွက်အနှုတ်လက္ခဏာဖြစ်ပါတယ်။ ဒီဟာမချိုးဘူးဆိုရင် ...
သို့သော်၎င်း၏ယခင်နှင့်မတူသည်မှာအခြေခံကိုယ်ထည်တည်ဆောက်ပြီးသည်နှင့်တပြိုင်နက်သင်ရွေးချယ်မှုတစ်ခုနှင့်အတူသင်ပြသခဲ့သည်။ သင်သည် Turbo သို့မဟုတ် Targa မော်ဒယ်ကိုတည်ဆောက်ခြင်းဖြင့်တည်ဆောက်မှုကိုပြီးအောင်လုပ်သလား။ တစ်ခုခုကိုတည်ဆောက်ခြင်းသည်သင်ထင်ကောင်းထင်သည်ထက် ပို၍ ပါ ၀ င်သည်။ ပထမတစ်ချက်မှကြည့်လျှင် Turbo မှ Targa သို့ပြောင်းလဲရန်လိုအပ်သောအရာအားလုံးသည်ခေါင်မိုး၏လဲလှယ်ရေးအစီအစဉ်သည်ပြောင်းလဲခြင်းဖြစ်သော်လည်းသင်နှစ်ခုစလုံးအကြားကွဲပြားခြားနားမှုများစွာရှိသည်ကိုမကြာမီသင်သဘောပေါက်လိမ့်မည်။
တည်ဆောက်ပုံ၏အရည်အသွေးနှင့်တီထွင်ဖန်တီးနိုင်မှုနှင့် ပတ်သက်၍ လုံလောက်စွာဖော်ပြထားသည်။ Porsche ကိုအဆုံးသတ်လိုက်သည့်အခါတွင်မူ၎င်းသည်မည်သည့်အပြောင်းအလဲကိုမဆိုဆက်လက်ပြုလုပ်သည်။ ကားများအကြားကွာခြားချက်များကိုစာရင်းပြုစုရန် ပို၍ အကျိုးရှိသည်။ ၎င်းသည်မည်သည့်ကားကိုတည်ဆောက်ရမည်နှင့်မည်သည့်အရာကိုပြသမည်ကိုဆုံးဖြတ်ရန်သင်ကူညီလိမ့်မည်ဟုမျှော်လင့်ပါသည်။
Turbo သည် 911 ၏စွမ်းအားထက်သန်သောဗားရှင်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ ဤစွမ်းအားကိုပိုမိုကောင်းမွန်စွာထိန်းချုပ်နိုင်ရန် Turbo တွင်ကြီးမားသောနောက်ဘီးမုတ်များ (ဤတွင်အသစ်သော5×5ကွေးသောအုတ်များအသုံးပြုထားသည်) အပြင်နောက်ကွယ်မှအထင်ကရပစ္စည်းများart နှင့် Sub- ပရိသကျေနပ်အောင်) ။ ခေါင်မိုးနှင့်နောက်ကျောအပိုင်းတစ်ခုလုံးသည် ပို၍ အစိုင်အခဲခံစားရသည်။ တကယ်တော့ Turbo နဲ့ပတ်သက်ပြီးအရာအားလုံးဟာတကယ့်ကိုထူးဆန်းနေတယ်။
နှိုင်းယှဉ်ကြည့်လျှင် Targa သည် ပို၍ ကြော့ရှင်းပြီးကြော့ရှင်းသည့်ခံစားမှုရှိသည်။ နောက်ဘီးမုတ်များသည်သေးငယ်ပြီးရှေ့တွင်ရှိသူများနှင့်ကိုက်ညီသည်။ နောက်ဘက်လုယူသောသူမရှိ; နောက်ဘက်ရှေ့မျက်နှာပြင်areaရိယာကိုပွင့်လင်းမြင်သာသောအပိုင်းအစများဖြင့်ဆောက်လုပ်ထားသည်။ ပျော့ပျောင်းသောခေါင်မိုးကိုလွယ်ကူစွာဖယ်ထုတ်ပြီးရှေ့မျက်နှာဖုံးတွင်သိမ်းဆည်းထားနိုင်သည်။ Targa သည်နောက်ကျောရှိအထင်ကရ roll roll bar ကိုတပ်ဆင်ထားပြီးနောက်ဆုံးတွင်အင်ဂျင်ကိုအတော်အတန်ဖယ်ရှားပစ်လိုက်သည်။
အသွင်အပြင်အရ Turbo ဗားရှင်းသည် Targa ကိုပို့စ်တင်ရန်ဖြစ်နိုင်သည်။ ချက်ချင်းပဲအထင်ကရခံစားနေရတဲ့အကြောင်းတစ်ခုခုပဲရှိတယ်။ ဟုတ်ပါတယ်, ဗားရှင်းနှစ်ခုစလုံးဟာဒဏ္areာရီဆန်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့်သင်က Porsche 911 ကိုစဉ်းစားမယ်ဆိုရင် Turbo ဟာအရင်ဆုံးစိတ်ထဲပေါ်လာလိမ့်မယ်။ ဒါကတာဂရာမှဘာမှမယူပဲဖြစ်မည်၊ ကားနှစ်ခုစလုံးသည်အတန်းအစားနှင့်ခေတ်မီဆန်းပြားပြီးကားတစ်စီးလုံးသည်အလွန်ကောင်းမွန်သည်။
ဒီအစုထဲ၌အသေးစားရုပ်ပုံများမပါ ၀ င်ပါ၊ သို့သော်ဒီမှာပြသမည့်ကြယ်ပွင့်သည် Porsche ကိုယ်တိုင်ဖြစ်သည်။
အခြားနှိုင်းယှဉ် Creator Expert စျေးကွက်ထဲ၌ရှိနေဆဲ၊ ထွက်ခွာသွားပြီဖြစ်သည် 10295 Porsche 911 မယုံနိုင်လောက်အောင်ယှဉ်ပြိုင်စျေးနှုန်းဖြစ်ပါတယ်။
2-in-1 set ၏သဘောသဘာဝကြောင့် Porsche 911 သည်တူညီသောမော်ဒယ်များထက်ပိုများသည်။10262 ဂျိမ်းစ်ဘွန်း Aston M ကartDB5 ၌တည်၏ ဥပမာတစ်ခုအနေနှင့်ဖြစ်သော်လည်းစျေးသက်သာသောစျေးနှုန်းဖြင့် ၀ င်ရောက်နိုင်သည်။ သို့သော်ရလဒ်မှာဘာမျှမစွန့်လွှတ်နိုင်ပါ။
အချို့သောနေရာများတွင်တည်ဆောက်မှုသည်ကျေနပ်လောက်ဖွယ်ကောင်းသည်။ အသစ်သော p ၏များစွာသောရှိပါသည်artအရေးကြီးဆုံးကတော့နောက်ဆုံး model (အထူးသဖြင့် Turbo version) ကတော်တော်လေးအံ့ st စရာကောင်းတယ်။ အဆိုပါချောမွေ့ပြောင်လက်လက်စွဲစာအုပ်, စတစ်ကာများမရှိခြင်းနှင့်သီးသန့်ပုံနှိပ် partဒါကိုတန်ဖိုးမြင့်ထုတ်ကုန်တစ်ခုလိုခံစားမိစေတယ်။
အကယ်၍ မင်းတို့ကိုအတိုချုံးတောင်းခိုင်းတယ် 10295 Porsche 911 စကားလုံးသုံးလုံးဖြင့်သူတို့သည် 'တီထွင်ဆန်းသစ်သော၊ စိတ်ဝင်စားဖွယ်' နှင့် 'ကြည်နူးဖွယ်' ဖြစ်လိမ့်မည်။ အဆိုပါတည်ဆောက်အတွေ့အကြုံကို st ထံမှတစ်ခုလုံးကိုဝမ်းမြောက်သောစိတ်ဖြစ်ပါတယ်art အပြီးသတ်ရန် - များပြားလှသောပုဒ်မခွဲသည်အဆင့်တိုင်းနှင့်အတူအံ့အားသင့်စရာများကိုပေးစွမ်းနိုင်ပြီးနှစ်သက်ဖွယ်ကောင်းသော၊ Lego ကအထူးအဆောက်အ ဦ အလတ်စား။ မော်ဒယ်နှစ်ခုစလုံးကိုပြီးစီးသည့်အခါလုံးဝလက်ရာမြောက်သောကျုးလွန်သူများဖြစ်ပြီး၎င်းတို့ကိုတည်ဆောက်ခြင်းအပေါ်ကြီးမားသောကျေနပ်မှုရှိသည်။
ဒီအစု၏ 2-in-1 format သည်အလွန်တရာ ၀ ယ်ယူရန်အတွက်ပြုလုပ်သည်။ အကြောင်းမှာ၎င်းအရွယ်အစားနှင့်စျေးနှုန်းများသည်မော်ဒယ်တစ်မျိုးထက်ပိုသောတည်ဆောက်မှုကိုခွင့်ပြုလေ့မရှိသောကြောင့်ဖြစ်သည်။ သင်ကအခြားတစ်ခုထက်ပိုနှစ်သက်လျှင်ပင် Porsche ကို၎င်း၏အခြေခံမော်ဒယ်ကိုပြန်ယူပြီး Turbo (သို့) Targa တစ်ခုခုကိုပြန်လည်ပြင်ဆင်ခြင်းသည်နာရီဝက်ခန့်သာကြာသည်၊ ထို့ကြောင့်မည်သည့်အရာနှင့်မည်သည့်အရာကိုကပ်ရမည်ကိုဆုံးဖြတ်ခြင်းမပြုမီနှစ် ဦး စလုံးတည်ဆောက်ရန်ကျွန်ုပ်တို့အကြံပြုပါသည်။
စျေးနှုန်းသည်အလွန်ဆွဲဆောင်မှုရှိသည်။ အထူးသဖြင့်တည်ဆောက်မှုသည်မည်မျှပျော်စရာကောင်းသည်၊ နောက်ဆုံးမော်ဒယ်များမည်မျှစိတ် ၀ င်စားသည်ကိုထည့်သွင်းစဉ်းစားခြင်းဖြစ်သည်။ ပရိသတ်များအတွက်စိတ်လှုပ်ရှားစရာပင်လျှင်အသစ်တစ်ခုကိုကမ်းလှမ်းရန်ဤတွင်လုံလောက်သည်ထက်ပိုသည်။ အမှု၌သင်တို့ကသေးထွက်အလုပ်လုပ်ခဲ့ဘူး, 10295 Porsche 911 ဝယ်ယူခြင်းနှင့်သင်၏ဖြည့်စွက်ကောင်းစွာကျိုးနပ်သောအစုတခုဖြစ်ပါတယ် Lego ကားဂိုဒေါင် (သို့မဟုတ်ကမ်းလွန်ရေတိမ်ပိုင်း) ။
ဒီဟာက မဟုတ် အဆိုပါအားဖြင့်ပြန်လည်သုံးသပ်ဘို့ထောက်ပံ့ပေးခဲ့သည် Lego Group - ကျုပ်တို့ကိုယ်တိုင်ဝယ်လိုက်တယ်၊ မင်းလည်းမင်းကိုဝယ်သင့်တယ်။
သင်ကူညီနိုင်သည် Brick Fanatics တက်ကောက်နေခြင်းဖြင့်အဲဒီလိုလုပ်နေစဉ် 10295 Porsche 911 ကျွန်တော်တို့ရဲ့တစုံတယောက်သောသူသည်သုံးနိုင်သည် တွဲဖက်လင့်ခ်များ။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်!
၁၀၂၉၅ Porsche 10295 ကိုဘယ်လောက်ကြာကြာတည်ဆောက်ရမလဲ။
အထဲမှတဆင့်အလုပ်လုပ်ရန်အိတ်ခုနစ်ခုရှိပါသည် 10295 Porsche 911 ခြေရင်းမော်ဒယ်ပြီးစီးမီ။ ၎င်းသည်အလွန်ပါ ၀ င်သော်လည်းပျော်စရာကောင်းသောတည်ဆောက်မှုဖြစ်ပြီးနာရီဝက်ခန့်ကြာမြင့်မည်ဖြစ်ပြီးအခြေခံမော်ဒယ်ကို Turbo သို့မဟုတ် Targa သို့ပြောင်းရန်လိုအပ်သည့်ထပ်ဆင့်အဆင့်များသည်နောက်ထပ်နာရီဝက်ခန့်ကြာလိမ့်မည်။
၁၀၂၉၅ Porsche 10295 မှာဘယ်လောက်များများပါလဲ။
10295 Porsche 911 အကြီးဆုံးဖြစ်ပါတယ် Lego System Porsche သည်ယနေ့အထိဖန်တီးခဲ့ပြီးစုစုပေါင်း 1,458 ခုပါဝင်သည်။ သို့သော်ယင်းတို့အားလုံးကိုတစ်ပြိုင်နက်တည်း၎င်း၏မူကွဲနှစ်ခုတည်ဆောက်မှုတွင်သင်အသုံးမပြုပါ။
10295 Porsche 911 ဘယ်လောက်ကြီးပါသလဲ
သင်တည်ဆောက်သည်ဖြစ်စေ 10295 Porsche 911Turbo သို့မဟုတ် Targa အမျိုးအစားနှစ်မျိုးစလုံးတွင်အတူတူပင်သတ်မှတ်ချက်များတူညီကြသည်။ အမြင့် ၁၀ စင်တီမီတာ၊ အရှည် ၃၅ စင်တီမီတာနှင့်အကျယ် ၁၆ စင်တီမီတာရှိသည်။
10295 Porsche 911 ဘယ်လောက်ကျပါသလဲ
၂၀၂၁ မတ်လ ၁ ရက်၊ Lego VIPs များ) 10295 Porsche 911 ထံမှရရှိနိုင်ပါသည် LEGO.com ယူကေတွင်ပေါင် ၁၁၉.၉၉၊ ဥရောပ၌ယူရို ၁၄၉.၉၉ နှင့်မြောက်အမေရိကတွင်ဒေါ်လာ ၁၄၉.၉၉ ဖြင့်ရောင်းချသည်။
← သင်၏တည်ဆောက်မှုကိုပြသပါ LEGO House အသစ်အတွက် Ideas ပြိုင်ပွဲ
တည်ဆောက်နိုင်သည့် LEGO Harry Potter နှင့် Hermione Granger တို့သည် ၂၀၂၁ ခုနှစ်တွင်ရောက်ရှိလာပါသလား။ →
Netflix ၏မူရင်းရှစ်ခုအား LEGO မှပြန်ဖွင့်ထားသည်
မေလ 13, 2021 Rachael ဒေးဗီးစ် မှတ်ချက်များကိုအဘယ်သူမျှမ
Toy review site, The Toy Zone, သည် LEGO ပုံစံ၌ Netflix မူရင်းရှစ်ခုမှရိုက်ချက်များကိုပြန်လည်ပြုလုပ်ခဲ့သည်။ ။ ။ ။
အခြား Lego ၏ပထမပုံရိပ် Marvelနွေရာသီအစုံ ၇၆၁၉၃ Benatar ကိုတွေ့ရှိခဲ့သည် ။ ။ ။
မေလ 13, 2021 ရော့ Paton မှတ်ချက်များကိုအဘယ်သူမျှမ
အသက်ပြင်းပြင်းရှူခြင်း - LEGO အတွက်ပြန်လည်သုံးသပ်ချက် Speed Champions 76904 Mopar Dodge // SRT ထိပ်တန်းလောင်စာကို set ။ ။ ။ <...
LEGO တွင်ရှည်လျားသောသတ်မှတ်ထားသည့်အမည်များအတွက်နောက်ပြိုင်ဘက်တစ် ဦး Speed Champions သမိုင်း, 76905 Ford ကား ။ ။ ။
LEGO လား Marvel 76191 Infinity Gauntlet အတွက်စံချိန်တင်အသစ်တစ်ခုကိုသတ်မှတ်ရန် LEGO Group?
မေလ 13, 2021 ခရစ် Wharfe မှတ်ချက်များကိုအဘယ်သူမျှမ
အသစ်ပေါ်ပေါက်လာတဲ့ LEGO Marvel 76191 Infinity Gauntlet အတွက်စံချိန်အသစ်တစ်ခုသတ်မှတ်တော့မည် ။ ။ ။
ဒီနွေရာသီရဲ့ Lego Marvel အစုံသည် LEGO စူပါဟီးရိုး Pantheon တွင်လွန်ခဲ့သောနှစ်ပေါင်းများစွာကမှားခဲ့သည် ။ ။ ။
LEGO VIDIYO 43114 Punk Pirate သင်္ဘောပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်း
မေလ 13, 2021 ယောရှုပုံပြင် မှတ်ချက်များကိုအဘယ်သူမျှမ
LEGO VIDIYO သည်အစောပိုင်း BeatBox ကို အသုံးပြု၍ ၄၃၁၁၄ Punk Pirate Ship တွင်ပင်လယ်ခုနစ်ခုကိုရွက်လွှင့်သည်။ ။ ။ ။
LEGO VIDIYO 43115 Boombox ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်း
LEGO VIDIYO သည် ၄၃၁၁၅ Boombox ဖြင့်အမှုအရာများကိုစတင်လုပ်ဆောင်သည်။ သို့သော်၎င်းကိုပေးနိုင်သည် ။ ။ ။